Qeybaha kala-guurka ee lagama maarmaanka u ah Reiss | Ragga Stylish
Haddii shirkadaha moodaduhu ay ahaan lahaayeen aqal Westerosi ah, hal ku dhiggoodu xagaagan wuxuu noqon karaa mid aad u wanaagsan: "Dayrta ayaa soo socota." Kii ugu dambeeyay ee na xusuusiya taas waa waqtigii loo diyaar garoobi lahaa nuska waa Reiss.
Taariikhda cusub ee shirkadda Ingiriiska waxay noo keeneysaa silsilado dhar muhiim ah oo leh qiimaha dheeraadka ah ee lagu shaqeynayo labadaba maalmaha qaboobaha xagaaga iyo waliba xilliga deyrta.
Muuqaalka ugu horreeya wuxuu udub dhexaad u yahay dhar gacmeed lagu dhejiyay ecru. Dharka quruxda badan waa waqti badhitaan ah waa inuu lahaadaa.
Isku darida laba qaybood oo iftiin ah waxay xaqiijineysaa kala-guur hufan laga bilaabo xagaaga ilaa deyrta. Ha ku degdegin inaad xirato codadka naaquska ahmaxaa yeelay dayrta ayaa aad u dheer.
Shaatiyada daabacan ayaa ah dhar kale oo Reiss iftiimiya sida ugu fudud ee loogu daro xagaaga iyo xagaaga labadaba.
Ilaa iyo inta heerkulku uu sii sarreeyo, shirkaddu waxay dhiirrigelinaysaa in lagu daro gaab, halka, waqtiga nasashada, taladeeda ay tahay in la xirto oo lagu rido surwaal gacmeed.
Muuqaalka ugu casrisan ee daabacaha Waa tan, oo ka kooban suudh, funaanad tolmo leh iyo kabaha Chelsea.
Suudh khafiif ah oo ah, inta lagu jiro xagaaga, waxaan ku xiran karnaa shaati gacmo gaab ah iyo kabo isboorti, halka, marka heerkulbeegyadu ay bilaabaan inay hoos u dhacaan, tani waxay umuuqataa mid ka mid ah xulashooyinka ugu soo jiidashada badan.
Marka la eego jaakadaha, Reiss waxaa ka go'an inuu sameeyo suede shay ah dharka ugu horreeya ee dharka dibedda xagaaga kadib.
Abuuritaanka lammaane weyn oo leh surwaal dhar ah, jaakadaha suede ayaa faa'iido badan u yeelan doona soo koobidda muuqaalkaaga haddii qaabkaagu u eg yahay mid rasmi ah oo aan caadi ahayn.
Shaati-gacmeedyada casriga ah ee loo yaqaan 'polo shirts' waa nooc kale oo ka mid ah qaybaha aan xiran karno sannadka oo dhan. Xilliga xagaaga, waxay si fiican ugu lamaaneeyaan gaab, surwaal dhar ah, iyo xitaa joggers.
Waqtiga nuska ah iyo waqtiga oo dhan oo dhiman illaa xagaaga soo socda, waxaan sameyn karnaa muuqaal casri ah oo rasmi ah haddii aan isku darno suud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Dayrta ayaa imaanaysa tifaftirka cusub ee Reiss